Imisiko Yezemfashini kaMeher Castelino Ikunikeza Ukubheka Emhlabeni Wobuhle - Abaphumelele
Imisiko Yezemfashini kaMeher Castelino Ikunikeza Ukubheka Emhlabeni Wobuhle
indlela yokwelapha i-alopecia ngokwemvelo
Isithombe: Meher Castelino Kukhiqizwe kabusha ngemvume
Meher Castelino’s Imfashini yemfashini yincwadi yemfashini yokuqala yase-India ngefomethi ye-Q & A ethatha ukubukeka okuhlekisayo, okumnandi, okunezihlathi, ulimi oluphakathi nokubukeka kwezemfashini, ubuhle nefilimu ngesitayela esiyingqayizivele sikaMeher.
Ifomethi yencwadi engajwayelekile ye-Q & A yenza ifundeke kalula ngenkathi ihambisa umfundi ezigabeni ezahlukahlukene zesitayela nobukhazikhazi. Ngesandulela sika-ace couturier, uTarun Tahiliani, nomklamo / imifanekiso embozwa emangalisa eyenziwe ngumklami oqeqeshwe nguMarangoni Istituto, u-Aniket Satam, isitayela se-racy sikaCastelino esinama-anecdotes ama-quirky nama-liners ama-hilarious, enza Imfashini yemfashini ukufundwa okuhle kokuhamba noma incwadi ephumula yombhede.
Wazalelwa eMumbai, ukuzibandakanya kukaCastelino kwezemfashini nobuhle kubuyela emuva ngonyaka we-1964 ngenkathi ethola isicoco sikaMiss India, ngemuva nje kokuphothula iziqu eLawrence School, eLovedale. WayenguMiss India wokuqala owakhethwa ngu Owesifazane ukuyomela izwe emiqhudelwaneni kaMiss Universe nakuMiss United Nations eMiami Beach, eFlorida naseMajorca Spain, ngokulandelana.
Imodeli edumile yezentengiso neye-catwalk, ubonakale emibukisweni yemfashini ebukhoma engaphezu kuka-2000, eminingi yayo ekhulelwe futhi yaqondiswa nguye. Ubuye futhi wahola iminyango eklama ukuthekelisa kanye nezindlu zemfashini zendawo futhi waba nguMhleli Wezemfashini Imfashini yeGentlemen Quarterly , Ubuhle futhi Eve’s .
indlela yokunciphisa amafutha esiswini ngokuzivocavoca umzimba
Uhambo olubanzi, uCastelino ulingise uHulumeni waseNdiya e-Australia, eHong Kong, eSingapore, eJapane, e-Indonesia, eSri Lanka, eThailand naseYugoslavia, emsebenzini othathe iminyaka engaphezu kwengu-14.
Funda futhi: Okumele kufundwe okungu-8 ukwengeza kuhlu lwakho lokufunda
ukuzivocavoca ukunciphisa amafutha esinqeni
amaphrinta aphezulu ama-5 e-india
izinzuzo zamafutha e-alimondi ngezinwele
ikhambi lasekhaya lokulawula ukuwa kwezinwele
ungasusa kanjani izinwele zesilevu
ukuzivocavoca kokulahlekelwa ngamafutha esiswini